चैत्र २ मा भिड्दै छन् पंचायत र डेस्टिनेसन काठमान्डौ ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > चैत्र २ मा भिड्दै छन् पंचायत र डेस्टिनेसन काठमान्डौ !
चैत्र २ मा भिड्दै छन् पंचायत र डेस्टिनेसन काठमान्डौ !
February 22, 2018 Nepali
आगामी चैत्र २ गतेको लागी २ चलचित्र पंचायत र डेस्टिनेसन काठमान्डौले प्रर्दशन मिति तोकोका छन् । पंचायत अहिलेको नयाँ चलचित्र हो भने डेस्टिनेसन काठमान्डौ करिब ६,७ वर्ष पहिले निर्माण भएको पुरानो चलचित्र हो । शरद अधिकारी निर्माता रहेको यस चलचित्रलाई दिवंगत निर्देशक दिपक रायमाझीको अन्तिम चलचित्र भनीएको छ । निर्देशक रायमाझीको निधन भएपछि बाँकी रहेको पोष्टप्रोडक्नको सम्पुर्ण काम निर्देशक मदुसुधन भट्टराईले पुरा गरेको बताईएको छ ।
डेस्टिनेसन काठमान्डौमा दिलिप रायमाझी,झरना थापा,केसब भट्टराई,रवि गिरि,बिक्रम मल्ल ठकुरी,बिकास चापागाँई लगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन् । पर्यटन सँग सम्बन्धीत रहेको बताईएको यो चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कलेक्सन गर्छ त्यो भने चैत्र २ पछि मात्रै थाहा हुने छ । त्यसैगरि यसै मितिमा प्रर्दशन गर्ने चाँजोपाँजोका साथ प्रचार प्रसार सुरु गरेको अर्को चलचित्र हो पंचायत । नेपालमा कुनै एक कालखण्डमा भएको पंचायती ब्यावस्था संग जोडीयर निर्माण गरिएको चलचित्र हो पंचायत । यो चलचित्रमा पंचायती ब्यवस्थामा भएका कुरीती र सुरीती दुबै कुरालाई दुरुस्तै देखाईएको निर्माण पक्षले दाबी गर्दै आईरहेको छ ।
पंचायतमा निता ढुंगाना,रुपा राना,सरोज खनाल,जानवी बस्नेत,गिता अधिकारी, गणेश गिरि,विशाल पहाडी लगायत कलाकारले अभिनय गरेका छन्, भने शिवमं अधिकारीको निर्देशन रहेको छ । नेपालमा पंचायती ब्यवस्था लामो समय सम्म टिक्न नसकेपनि यो चलचित्र सिनेमा हलमा कति लामो समय सम्म टिक्छ ? त्यो पनि चैत्र २ पछि मात्रै थाहा हुने छ ।
पंचायतलाई शुशान्त श्रेष्ठ,संकर सुबेदी र रवि अधिकारी ले निर्माण गरेका हुन् ।